यौन हिंसाको आरोपमा एसएसपी राणा निलम्बित, एसएसपी सिंहलाई के हुन्छ?
नेपाल लाइभ शुक्रबार, माघ १७, २०७६, १३:०९
काठमाडौं– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सौरभ शमशेर राणा निलम्बित भएका छन्।
एक महिलामाथि यौन हिंसा गरेको उजुरी परेपछि उनलाई गृहमन्त्रालयले निलम्बन गरेको हो। उनी संघीय प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत छन्।
यौन हिंसाको गम्भीर आरोप लागेपछि बहाल रहेको अवस्थामा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने भन्दै उनलाई गृहमन्त्रालयले निलम्बन गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो।
राणाजस्तै प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एसएसपी राकेश सिंहविरुद्ध पनि यौन हिंसाको आरोप लागेको छ। उनीमाथि भने अहिलेसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।
प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका एसएसपी सिंहले आफू मातहतको कार्यालयकै महिला कर्मचारीलाई यौन शोषण गरेको आरोप लागेको हाे। तर, यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार पीडक (एसएसपी सिंह) र पीडितबीच सहमतिमा नै यौन सम्बन्ध भएको र पीडितसमेत नखुलेकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रतिक्रया दिएका छन्।
यौन शोषण गरेको भन्दै १६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हालिएको उजुरीमाथि अझै छानबिन हुन नसकेको हाे। प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् गृह हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नै पुगेको उक्त उजुरीको फाइल गोप्य राखिएको छ।
पदीय शक्तिका आडमा भएको यौन सम्बन्ध पनि बलात्कार हुने नजिर, एसएसपी सिंहमाथि अब के हुन्छ?
विभेद नगरी राहत उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरलाई नेता साहको आग्रह
कैलाली र कञ्चनपुरमा नेपाली सेनाद्वारा थ्रोट स्वाब संकलन
विभेद नगरी राहत उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरलाई नेता साहको आग्रह शनिबार, चैत २२, २०७६
कैलाली र कञ्चनपुरमा नेपाली सेनाद्वारा थ्रोट स्वाब संकलन शनिबार, चैत २२, २०७६
इन्द्रावती गाउँपालिकामा ५० लाखको कोरोना रोकथाम कोष शनिबार, चैत २२, २०७६